ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Huai 'An Hongyu ဆေးပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Hongyu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အသွင်အပြင်၊ အရွယ်အစား၊ တိကျမှုနှင့်အထုပ်အပိုးများအပါအ ၀ င်တူရိယာတစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးရန်ဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည်တိုင်းပြည်နှင့်အတွင်းပိုင်းစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များ၏အထူးလိုအပ်ချက်လည်းရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ဖောက်သည်များ၏အထူးအမှာစာများအတွက်၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ၀ န်ထမ်းများသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအမြဲတမ်းအလေးအနက်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဟွန်ьюဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုမှကိရိယာတစ်ခုစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမျှော်လင့်သည့်အတိုင်းအမြဲဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု တရုတ်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM / ODM ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အတော်လေးအရေးကြီးသည်ဟုယူဆရမည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဓိက KPI (အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း):
၁ ။ Hongyu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာပစ္စည်းများသည် GB / T1220-2007 နှင့် GB / T3620.1-2016 နှင့်အညီဖြစ်ရမည်။
2. အရွယ်အစားသည်းခံစိတ်။ Hongyu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများ၏အရွယ်အစားသည်းခံနိုင်မှုသည်စံပန်းချီကားများတွင်ဖော်ပြထားသောသည်းခံစိတ်ထက်လျော့နည်းသင့်သည်။
3. မျက်နှာပြင်ချောမွေ့။ Hongyu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာအားလုံး၏မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့သည် ၀.၈ μmထက်နည်းရမည်။ အသွင်အပြင်ကိုသေချာစွာထားရမည်။
4.Hardness စမ်းသပ်မှု။အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစံ GB ကို / T230.1-201 နှုန်းအဖြစ် operating ရပါမည်။
5.Anti- ချေးစမ်းသပ်ခြင်း။ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေစစ်ဆေးမှုကိုစံ YY / T 0149-200 အရအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်
ငါတို့သိသည့်အတိုင်းတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည်အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ Hongyu Medical သည်ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများ၏ဖောက်သည်များအားအမြဲတမ်းအလေးအနက်ထားသည်။
Huai'an City Hongyu Medical Devices Co. , Ltd. သည်“ ပထမ ဦး ဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိပထမနိယာမ” နှင့်အညီအောက်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁။ အခမဲ့သတင်းအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊
၂။ အာမခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ အာမခံမဟုတ်သောကြောင့်လူသားမဟုတ်သောပျက်စီးမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တူရိယာများ၏အရည်အသွေးသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်လာသောအခါ၊ တူရိယာများကိုအခမဲ့အစားထိုးမည်။
၃။ တုံ့ပြန်မှုကို ၂၄ နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မှသင်တောင်းဆိုချက်ကိုသင်ပေးပို့သည့်အခါသင်၏တောင်းဆိုချက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်းလက်ခံလိမ့်မည်။
4. အမြန်ပေးပို့အချိန်။ ပုံမှန်အတိုင်းသင့်ရဲ့နမူနာမှာယူမှုကို ၄၈ နာရီအတွင်းမှာပေးပို့မှာဖြစ်တယ်။